Todoist na-agbakwunye usoro ihe omume Smart maka njikwa "njikwa" | Gam akporosis
Todoist enyela ohere "ịhazi" ihe aga-eme maka Amamịghe echiche
Ruo ụbọchị abụọ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume ị wepu okwu ahụ bụ "Artificial Intelligence" n'ọnụ anyị. Ma ọ bụ site na foto mgbakọ, netwọ netwọ ma ọ bụ mmụta igwe, ikike nke ụfọdụ ọrụ ga-adị ịrịba ama, Dị ka ọ dị na nnwale Google ọhụrụ nke ahụ na-aga "guessing" ihe osise na anyị na-eme na ihuenyo n'ụzọ zuru oke ọgụgụ isi.
Todoist sonyere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnọkọ ọgụgụ isi nke Artificial site na imelite ngwa ya dị ukwuu maka listi ime, nke taa gụnyere ihe a na-akpọ "Intelligent Programming". Atụmatụ a na-abịa kwadoro site na smart ma ọ bụ AI nke na-atụ aro ụbọchị kwesịrị ekwesị maka ọrụ ọ bụla. AI a dabere na ngwa ngwa nke ọrụ ahụ, usoro ndị gara aga nke omume onye ọrụ (nkuzi igwe) na ọrụ ọrụ dị nso nke onye ọrụ nwere.
1 Ngwa nke anatara na-eme oké osimiri nke «smart»
2 Amamịghe echiche na ọgụgụ isi
Ngwa nke anatara na-eme oké osimiri nke «smart»
Naanị, nke a na-akpọ «Nhazi Smart«, Nsonaazụ onye njikwa ọrụ nwere ọgụgụ isi nke na-enye onye ọrụ ohere ichetara ha ihe ha kwesịrị ime, ma e wezụga inye aka na njikwa nke usoro iheomume ka mmadụ ghara ịba ụba site nchịkọta nke ọtụtụ.
Ọ bụrụ na njirimara a eruola Todoist taa, ọ bụ n'ihi ụkpụrụ ndị otu ahụ nwetara n'azụ ngwa a. Ha bidoro ịghọta na "ndị na-akụ snow", ndị ọrụ habugharịrị ihe aga-eme ha n'oge gara aga maka ụbọchị na-esote ma ọ bụ izu na-abịa, ha na-arụkọ ọrụ ka oge na-aga n’enweghị ike ịrụ ha.
Ha chịkọtara ụfọdụ data na-adọrọ mmasị nke dugara ha ichepụta ọrụ ọhụrụ a, ebe ọ bụ na akụkụ dị mkpa nke ndị ọrụ rụzigharịrị n'usoro ọrụ 50 ruo 70 kwa ụbọchị. Ihe nke a gụnyere bụ na ịnwe ọtụtụ ọrụ na-echere n'otu ụbọchị, ikike nke ngwa dị ka Todoist emebila, yabụ Smart Schedule bụ azịza nke a.
Amamịghe echiche na ọgụgụ isi
Anyị amataworị ụbọchị ndị a gara aga otú Play Music ugbu a jiri ụfọdụ data na ọ na-esi na ekwentị onye ọrụ nweta ya kwadoro ụfọdụ ndepụta playback mgbe ngwa na oru na oge obula. Indicatedkpụrụ dịka ọnọdụ, ọnọdụ ihu igwe ma ọ bụ oge, gosipụtara iji nye ndepụta abụ kacha mma.
Nke a bụ ebe AI na-abanye dị ka ọ dị na Todoist site n'inyere ndị ọrụ aka mepụta atụmatụ dị mma maka echi na izu na-abịa. A ga-emezigharị oge gafeworonụ na nnukwu, a na-ekenyekwa ndị na-akwadoghị oge kachasị mma. Ọrụ ndị a ga-edozi mgbe niile site n'aka onye ọrụ n'onwe ya.
Todoist na-eji data a Performrụ Smart dutọ oge amụma:
Omume onye ọrụ- Nke a dabere na mgbe ndị ọrụ kenyere na dechara aga-eme na n'oge gara aga, na-atụ aro ga-eme n'ọdịnihu ụbọchị maka ndị otu ihe aga-eme. Ọ bụrụ na arụ ọrụ nwere okwu gụrụ ka a na-ekenyekarị na Fraịde, Smart Schedu ga-atụ aro ọrụ ndị metụtara otu ihe a na Fraịde.
Atụmatụ ngwa ngwa nke ọrụ ahụ: Daalụ maka meta-nyocha nke ndị ọrụ Todoist niile, "gụọ akwụkwọ" ga-enwe ọrụ dị ala karịa "idozi ahụhụ"
Next ọrụ ibu- Ga-eburu n'uche ọrụ niile na-abịanụ iji kesaa ụbọchị kwesịrị ekwesị dabere na ibu site na ụbọchị
Izu ụka na izu ụka: Nhazi oge ga-amata otu esi akọwa ọrụ maka ngwụsị izu na ndị maka ụbọchị n'ime izu
Njedebe nke ụbọchị atụmatụ onye ọrụ: a ga-amata ya mgbe onye ọrụ kwụsịrị ịkwụsị ọrụ n'oge ụbọchị
Ebumnuche ndị ọrụ kwa ụbọchị- Site n’inye gị ohere ịtọ ma nyochaa ebumnuche kwa ụbọchị na kwa izu dabere na ọnụọgụ nke ọrụ, Smart Schedule ga-atụ aro ụbọchị kwesịrị inyere gị aka.
Nnukwu ihe ọhụụ ga-eme ka ị nwekwuo ike iji Todoist site ugbu a gaa na nke ahụ bụ ya mere dabere na igwe mmụta. Ikwesiri inwe nwelite site na Playlọ Ahịa Google.
Todoist: Ime Ndepụta
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Todoist enyela ohere "ịhazi" ihe aga-eme maka Amamịghe echiche
A na-emelite Google Allo na ikike ịkọ emojis dabere na gburugburu
Otu esi eji vidiyo ọ bụla dị ka akwụkwọ ahụaja eserese